SomaliTalk.com » 2014 » May » 30
Home » Archive Maalinta May 30th, 2014
Bandhig suugaaneed lagu qabanayo UK, Axad June 1, 2014 – xaggee, goorma… eeg ogeysiiska…
Hoggaamiyaha Wanaagsani waa Horumarka Ummadda.
ILAAHAY Subxaanah Watacalaa ayaa Mahad oo dhami usugnaatay, waxaana ku salliyayaa Suubanaha Muxammed Naxariis iyo Nabadgalyo Korkiisa ha ahaatee. Maqaalkaygaan waxaan jeclaystay inaan intii ILAAH iga fahansiiyay karaankaygana ah inaan wax ka iraahdo cinwaankaas kor kuxusan,waloow marka laga hadlayo hoggaaminta(Leadership) ay culumo iyo aqoonyahanno aad oogu xeel dheeri horay uga hadleen.Haddana waxaan...
Xildhibaan Ibraahim Suleymaan Ilko case “Somaliland iyo Somaliya marka la isku daro ayaa la yiraahdaa Jamhuuriyadda Soomaaliya”. Khudbad uu ka jeediyey Minneapolis
Qaybtii saddexaad ee kulankii ka dhacay Minneapolis oo ay khudbado ka jeediyeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya. Ibraahim Suleymaan X.Nuur (Ilka Case) oo isna inta badan ka Hadley arrimaha dastuurka ayaa waxaa hadaladiisa ka mid ahaa“annigu waxaa la igu soo riixey Dastuurka mar baan wasiir ka ahaa ilaa sided bilood ah, waqti addag bey ahayd xoogaa dhibkeygaa batey marka waa la iga...
Muqdisho, May 29, 2014 — Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya mudane Cabdiweli Sheekh Axmed Maxamed oo maanta shir guddoomiyey kulankii caadiga ahaa ee Golaha Wasiirada ayaa waxaa looga hadlay ansixinta gudiga madaxa banaan ee dib-u- eegista Dastuurka iyo Arrimaha la xariira amniga. Wasaarada Dastuurka iyo Arrimaha Federaalka ayaa golaha usoo gudbisay xubnaha gudiga madax banaan...